एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको आईपीओमा पहिलो दिन कति पर्याे आवेदन ? – BikashNews
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको आईपीओमा पहिलो दिन कति पर्याे आवेदन ?
२०७७ साउन १६ गते १७:५४ विकासन्युज
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले निष्काशन गरेको साधारण सेयर(आईपीओ)मा पहिलो दिन २३ लाख ८१ हजार ३ सय ८० कित्ता सेयरको लागि आवेदन परेकाे छ । शुक्रबार दिउँसो साँढे ४ बजेसम्ममा सो मात्राकाे आवेदन परेकाे सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलले जनाएको छ ।
क्यापिटलका अनुसार सो अविधसम्म ५० हजार एक सय ७३ जनाले २३ लाख ८१ हजार ३ सय ८० कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिएका हुन् ।
संस्थाले साउन १६ गते(आज) देखि सर्वसाधारणमा ३३ करोड ९८ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो ।